UNcikazi uncoma ukuzimisela kwabadlali be-Arrows - Impempe
UNcikazi uncoma ukuzimisela kwabadlali be-Arrows
‘Abafana bami ngibabiza ngezithakazelo ngoba ngiyabahlonipha futhi nabo bayangilwela enkundleni.’
Lawa ngamazwi omqeqeshi weLamontville Golden Arrows, uMandla Ncikazi, awakhiphe ngesikhathi ebuzwa ukuthi iyiphi imfihlo yakhe yokuthi iqembu lenze kahle yize kubhoke iCoronavirus.
Akafuni nakancane ukuqhakambisa ukuthi yize iqembu lishiywe uSteve Komphela izintambo zathathwa uyena kodwa lenza kahle sengathi akwenzekanga lutho. Kunalokho uthe umhlonipha kakhulu umqeqeshi ohambile futhi akafuni kube sengathi yena ufike nemilingo.
“Laba bafana bayangithemba futhi bayangilwela. Basebenza ngokuzikhandla okukhulu. Njengomuntu wasemakhaya ngiyaqonda ukuthi iyiphi indlela okumele ngibaphathe ngayo ngoba iningi lapho aliyanga kude nemfundo. Akumeleke ngifike kubona ngikhulume sengathi angikwazi lokho. Ngiyingxenye yabo. Ngibabiza ngezithakazelo okukhombisa ukuthi nami ngiyabahlonipha. Siyahloniphana kwi-Arrows,” kusho uNcikazi uzwa ukuthi lokhu akushoyo kusuka ngaphakathi kuyena.
I-Arrows ishaye iChippa United ngo 1-0 emdlalweni weDStv Premiership eSugar Ray Xulu Stadium, eClermont, ngoMgqibelo. UNcikazi uthe akulula neze ukusebenza nabadlali ngaphansi kwemigomo yeCorona.
“Akekho umqeqeshi owacijelwa lesi simo. Kunzima kakhulu kodwa siyazama ukuthi impilo iqhubeke. Lonke ibhola lithintekile ezweni akuthina sodwa. Kumele sidlale ngaphandle kwezibukeli okuyinto enzima kakhulu. Nokho kumele siqonde ukuthi ibhola londla imindeni eminingi kakhulu,” kuchaza uNcikazi.
“Njengamanje singodokotela siyokho konke kubadlali. Lesi yisikhathi esinzima kakhulu emhlabeni. Kodwa okuhleli ezingqondweni ukuthi phela i-Arrows iyingxenye yomphakathi, ngakho konke okwenzekayo kuyasithinta.”
Uvumile ukuthi abadlalanga kahle emdlalweni weChippa ngoba bese kunesikhathi bagcina ukudlala.
“Bese kuphele izinsuku ezilinganiselwa ku-20 sagcina ukudlala. Kodwa ngoba abadlali bami bayazikela sikwazile ukuwina. Laba bafana banikela ngakho konke abanakho,” kuncoma uNcikazi.
Uphethe ngokuthi kungaba kubi uma imidlalo yePSL ingamiswa kodwa uyaqonda ukuthi isimo sibi ezweni.
“Konke okwenzeka kwamanye amaqembu kuyenzeka nakithi. Siyagula siphinde silulame. Kungakubi uma kungamiswa imidlalo. Ngikholwa ukuthi isosha lifela emisebenzini yalo kodwa ngakolunye uhlangothi sonke siyabona ukuthi kwenzekani,” kusonga uNcikazi.
I-Arrows isendaweni yesihlanu kwi-log yePremiership futhi ingelinye lamaqembu angayazi induku kule sizini.
Previous Previous post: IPirates bayikiribhe isiyophuma nawo amaphuzu e-Orlando Stadium
Next Next post: Libukeka lifiphala ikusasa likaDyantyi ebholeni lombhoxo